सिन्धुपाल्चोकको ‘गाउँले सहकारी’का सचिव श्रेष्ठले गरे ब्रम्हलुट ! – मिलिजुली खबर
सिन्धुपाल्चोकको ‘गाउँले सहकारी’का सचिव श्रेष्ठले गरे ब्रम्हलुट !
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नम्बर १४ डढुवामा रहेको गाउँले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सचिवले ब्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको खुलसा भएको छ ।
सहकारीका अध्यक्ष ओम बहादुर बस्नेत एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारीलाई सचिव शेर बहादुर श्रेष्ठले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर ब्रम्हलुट मच्चाएको बताउनुभएको छ । सचिव श्रेष्ठले सहकारी ब्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अध्यक्ष बस्नेतले छानविन गर्न समेत माग गर्नुभएको छ ।
सचिव श्रेष्ठले मल, बिउ, स्टेसनरी सामान, कुर्सी, टेबल, कम्प्युटर, विद्यालयको दिवा खाजा लागि उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र अन्य सदस्यलाई दिईएको जिम्मेवारी समेत खोसेर आफैले एकलौटी गरेको बताइएको छ । सचिव श्रेष्ठले सहकारीका अध्यक्षलाई औठा छाप भन्दै मानमर्दन र गाली बेज्जत गर्ने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सहकारीको सबै कागजपत्र जफत गरेर सचिव श्रेष्ठले लुकाएको अध्यक्ष बस्नेतको आरोप छ । सचिवले अध्यक्षलाई हात खुट्टा भाँचिदिने र ज्यान मा’र्ने ध’म्की समेत दिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अध्यक्ष बस्नेतले आफ्नो ज्यानको रक्षा गरिदिन र सहकारीमा भएको आर्थिक अनियमितताको छानविन गर्न शेयर सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
धुलिखेल-८ का युवालाई ड्राइभिङ तालिम, यस्तो छ मापदण्ड
सिन्धुपाल्चोकका वाईसीएलले एमालेका विद्यार्थीलाई कोठामै पुगेर कुटे